किन घण्टौँसम्म डाउन भयो फेसबुक ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»बिज्ञान/प्रबिधि»किन घण्टौँसम्म डाउन भयो फेसबुक ?
किन घण्टौँसम्म डाउन भयो फेसबुक ?
By रिता घिसिंग on १२ माघ २०७४, शुक्रबार ०८:४८ बिज्ञान/प्रबिधि
विश्वमै सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बिहीबार रातिदेखि डाउन भएको छ । विश्वका करोडौँ युजरहरुले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक चलाउन पाएका छैनन् ।
करोडौँ प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसबुक पुरै डाउन भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । शुक्रबार बिहानसम्म पनि डाउन रहेको अवस्थामा फेसबुकले भने सुचारु भइसकेको दाबी गरेको छ।
‘प्राविधिक समस्याका कारण फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या देखिएको थियो । तर हामीले समाधान गरिसकेका छौँ, यो असुविधाप्रति हामी क्षमा चहान्छौँ’, फेसबुकका प्रवक्ताले ईमेलमार्फत भनेका छन् ।
समाचार अनुसार फेसबुक उत्तर पूर्वी अमेरिकामा पुरै बन्द भएको थियो । त्यसैगरी देशका मूख्य महानगरहरुमा पनि फेसबुक खुलेको थिए । त्यसैगरी पश्चिमी तटीय सहरहरुमा पनि फेसबुक बन्द भएको थियो ।
डाउनडिटेक्टर वेबसाइटका अनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्राम शुक्रबार बिहानसम्म मध्यमेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, युरोप र एसियामा पनि पुरै डाउन भएको छ।
समाचार अनुसार फेसबुक डाउनको समस्या बेलायतका म्यानचेस्टर, बर्मिंघमसहितका ठुला सहरमा पनि देखिएको थियो त्यसैगरी अन्य युरोपियन देशहरु फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड र जर्मनीमा पनि देखिएको छ ।
फेसबुक डाउन भएपछि अलमलम परेका प्रयोगकर्ता यसबारे सूचना पक्का गर्न ट्वीटरको सहारा लिएका थिए । धेरै प्रयोगकर्ताले ट्वीटरबाट फेसबुकमा समस्या रहेको कुरा आदानप्रदान गरेका थिए ।
‘फेसबुक डाउन भएको सूचना मैले ट्वीटरबाट पत्ता लगाएँ’, एक प्रयोगकर्ताले भनेका छन्, ‘म मात्रै होइन रहेछु, फेसबुक डाउन भएको प्रयोगकर्ता ।’
घण्टौँसम्म डाउन हुँदा पनि फेसबुकले भने यसबारे तत्कालै जानकारी दिएको थिएन । प्रयोगकर्ताहरुले अन्य सामाजिक सञ्जालबाट चासो राखेपनि फेसबुकले भने यो समस्याको कारणबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन उचित ठानेन । प्रयोगकर्ताले ट्वीटरबाट गरेको गुनासोको समेत फेसबुकले प्रतिक्रिया नदिई केही सञ्चारमाध्यमलाई ईमेलबाट यसबारे आफ्नो धारणा पठाएको थियो ।
नेपालसहितका एसियाली मुलुकमा पनि फेसबुक शुक्रबार सबेरैसम्म डाउन थियो । नेपाली समयअनुसार मध्यरातिसम्म सुचारु रहेको फेसबुक त्यपछि शुक्रबार बिहान साढे ६ बजेसम्म डाउन थियो । फेसबुक डाउनबारे अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘म फेरि पनि भन्छु, फेसबुक डाउन भएको छ’, फेसबुकले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि उनी आफैँ डाउन भएको पक्का गरेका थिए ।
फेसबुक डाउन भएपछि केही कार्यालयहरुमा आपतकालिन अवस्था आएको भन्दै कर्मचारीहरु हड्बडाएका थिए । एउटा चर्चित टिभी शो का प्रस्तोताले कर्मचारीहरुलाई शान्त रहन भन्दै बस्न लगाउनुपरेको थियो ।
समाचार अनुसार भारत, नेपाल, मलेसिया र इन्डोनेसियाका अधिकांश क्षेत्रमा फेसबुक घण्टौँ डाउन थियो । फेसबुक कम्तिमा ६ घण्टासम्म डाउन हुँदा विश्वभरका प्रयोगकर्ता आत्तिएका थिए ।
उता फेसबुकले डाउन भएको पुष्टि गरेपनि यसको कारणबारे अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । उसले यति भनेको छ, ‘हामीले समस्याको समाधान गरिसकेका छौँ, फेसबुक सुचारु भइसकेको छ ।